बैंकिंङ Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - जनता बैंकले घोषणा गर्यो नगद लाभांश
जनता बैंकले घोषणा गर्यो नगद लाभांश
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले ८.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ । हिजो बसेको संचालक समितिको २६७ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को नाफाबाट सो नगद लाभांश घोषणा गरेकोे जनाएको छ । कुल नाफा १ अर्ब २७ लाख ७९ हजार ५ सय ५१ को वितरण योग्य मुनाफा ६८ करोड ६० लाख ६२ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०७५ असार मसान्तमा कायम रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी रु. ८ अर्ब ७ लाख ८५ हजार ९ सय २५ को ८.५० प्रतिशतले हुन आउने सो रकम नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावको सुचना नेप्सेलाई पनि गराएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
पाकिस्तान-भारत कारोबार सम्भावनाभन्दा धेरै कम : विश्व बैंक
पाकिस्तान । पाकिस्तान र भारतबीचको व्यापार कारोबार सम्भावनाभन्दा निकै तल अर्थात् दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर भएको भन्दै विश्व बैंकले एक प्रतिवेदनमार्फत चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले भनेको छ, “यदि दुई छिमेकीले मानव सिर्जित अवरोधहरूलाई हटाउने हो भने मात्रै पाकिस्तान र भारतको कारोबारमा करिब ३८ अर्ब डलर पुग्ने देखिन्छ, जुन वर्तमान् अवस्थामा झण्डै दुई अरबको हाराहारीमा छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सिसिडी रेसियो टाईट बनेपछि छटपटाएका वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा दैनिक जसो ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । यो प्रतिस्पर्धामा कुमारी बैंक सबैभन्दा अगाडि देखा पर्न थालेको छ । बैंकले आज प्रकाशित गरेको ब्याजदर सम्बन्धि सुचनामा विशेष मुद्धती खातामा १३ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको छ । तीन बर्षसम्मका लागि रकम जम्मा गर्न सकिने उक्त खातामा बचतकर्ताले न्युनतम १० हजार रुपैयाँदेखि जतिसुकै रकम पनि जम्मा गर्न सक्नेछन् । साथै थप ५० पैसा बचतकर्ताले आफ्नो बार्गेनिङ क्षमताको आधारमा थप गर्न सक्नेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठनपछि शेयर बजारमा लगातार पहिरो जानु र बैंकहरुले अन्धाधुन्द निक्षेपमा व्याज बढाउन थालेपछि बल्ल अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको घैंटोमा घाम लागेको छ । वित्त बजार र पूँजी बजारमा देखिएको असन्तुलन र विकृतीमाथि एक साताभित्र अध्ययन गरी समाधानका राय सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई जम्मा ७ दिनको समय सीमा दिइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
गौशाला । प्रभु बैंकले बैंकिङले महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार कार्यालय परिसरमा बैंकिङ सेवाको थालनी गरेको छ । प्रभु बैंकले भन्सार कारोवारलाई मद्दत गर्ने उद्देश्यले एक्सटेन्सन काउण्टर स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएको भन्सार कार्यालयका प्रमुख केशव भण्डारीले बताए । भन्सार कार्यालयबाट झण्डै पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको सदरमुकाम जलेश्वरमा मात्र बैंक रहेकाले बाटोमा पर्ने सुनसान फाँट पार गर्दै दैनिक करोडौँ राजश्व बैंक दाखिला गर्नु भन्सारकर्मीका लागि जोखिमपूर्ण थियो भने अब सहज भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल– भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका ७ वटा भन्सार कार्यालयहरुमा बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित प्रभु बैंकले नयाँ एक्स्टेन्सन काउण्टरहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । झापाको भद्रपुर, सुनसरीको कोशी ब्यारेज, सिराहाको ठाडी, महोत्तरीको जलेश्वर, नवलपरासीको महेशपुर, कपिलवस्तुको सुठौली र कैलालीको सति भन्सार कार्यालयहरुमा बैंकले एकैपटक एक्स्टेन्सन काउण्टरहरु सञ्चालनमा ल्याई सेवा प्रारम्भ गरेको हो । भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले एक समारोहका बीच बैंकको जलेश्वर भन्सार राजश्व संकलन काउण्टर शुभारम्भ गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
आजै जनता बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा १२.५ प्रतिशतसम्म व्याज दिनेभन्दै आफ्नो प्रोडक्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब कर्जाको ब्याजदर पनि थप बढ्ने निश्चित छ। यसबाट साना बैंकहरुलाई तत्काल केही राहतको महशुस भएपनि बैंकहरुबीच निक्षेपको तानातान बढ्ने मात्र होइन उद्यमी व्यापारीमाथि कर्जाको व्याजदर थप बोझका रुपमा पर्नजाने निश्चित छ । काठमाडौं । अहिले बैंकर्स संघको नेतृत्व गरिरहेका छन् ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले । उनी एनबी बैंकका सिईओ पनि हुन् । उनले नेतृत्व गरेको बैंकपनि सानोमध्ये कै हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । "नेपाली जनताको बैंक,जनता बैंक" ले समकालिन वित्तीय बजारलाई मध्यनजर गर्दै ग्राहकहरुको हित संरक्षण हुनेगरी निक्षेपमा दिइने ब्याजदरमा समायोजन गरेको छ । आज बैंकले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गदै जनता बैंकको मुद्दती निक्षेपमा रकम जम्मा गर्ने ग्राहकहरुले अहिलेसम्मकै सर्बाधिक ब्याज पाउने भएका छन् । सुरक्षित लगानी,उच्च प्रतिफलको स्लोगनमा मासिक ब्याज पाउने गरी जनता मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको हो । यस मुद्दती योजनामा ग्राहकहरुले आफ्नो खातामा न्यूनतम रु. १ लाख जम्मा गर्नु पर्नेछ ।	थप पढ्नुहोस्
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सिईओमा अनिल ज्ञवाली
काठमाडौं । निकट भविष्यमा नै संचालनमा ल्याउन लागिएको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक संचालनमा आउनका लागि अन्तिम प्रक्रियामा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको बैंकले अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा सीईओ नियुक्ति गरेको हो । ज्ञावाली तत्कालिन नेपाल अरब बैंक (अहिलेको नबिल) को संस्थापक कर्मचारीका रुपमा ३३ बर्ष अगाडि बैंकिङ करिअर सुरु गरेका व्यक्ति हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
कुमारी बैकले गर्यो लाभांश प्रस्ताब, १२.७५ प्रतिशत बोनस शेयर
काठमाडौं। कुमारी बैंकले आर्थिक बर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंकले आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले गत बर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई १२.७५ प्रतिशत बोनस शेयर प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित बोनसमा तत्कालिन काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, माहाकाली विकास बैंक , काँक्रेबिहार विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स कम्पनीका शेयरधनीलाई बोनसमा लाग्ने कर छुट हुने छ। प्रस्ताबित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंक र साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउने छन्। बैकले प्रस्ताव गरेको लाभांशपछि चुक्ता पूँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ ।	थप पढ्नुहोस्